URasta udwebe uTrump | Scrolla Izindaba
URasta udwebe uTrump
UDonald Trump odumile futhi ongasizi ngalutho, ube nemifanekiso ebabazekayo efakwe emahhotela nakumaqembu akhe.
UMengameli waseMelika waze walengisa nohlaka lwephephabhuku i-Time olungamanga, olwalubhalwe ukuthi uyindoda yonyaka – nalowo mklomelo akazange awunqobe.
Kodwa lo mdwebo wengcweti yakuleli uRasta, owaziwa ngemidwebo yakhe yabantu abadumile, lo mdwebo kubonakala sengathi awuzukulengiswa kanye neminye, kwenye yezindawo zikaTrump zokudlala igalofu.
Lesi sithombe sikhombisa uTrump odangele, emile ngemuva komkakhe uMelania futhi ubukeka emuncu ebusweni.
URasta (ogama lakhe langempela nguLebani Thaka Sirenje) uthe, wenza lo mdwebo ngemuva kokuzwa ukuthi uTrump noMelania basesibhedlela ngemuva kokuhaqwa igciwane le-Covid-19.
“Ngaqala ukupenda nokudweba lo mdwebo ngenhloso yokuthumele izifiso zami ezinhle kubona, ukuze balulame ngokushesha,” kusho uRasta.
Uma uTrump eke wawubona, kungenzeka abuyele esibhedlela.